အကြီးစား Porn အသုံးပြုသူချိန်းတွေ့ခြင်းလား (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
တစ်ဦးကအကြီးစား Porn အသုံးပြုသူချိန်းတွေ့? (2011)
ကျားမခွဲခြားဘဲလိင်မှုကိစ္စမည်သို့ပင်ဖြစ်စေလူအများစုသည်ယနေ့အချိန်တွင်အလွန်အမင်းလှပသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၊ ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုရွေးချယ်စရာများနှင့်လိင်ကစားစရာများကိုအလွန်အမင်းအသုံးပြုနေကြသည်။ တကယ်တော့၊ သင်ချိန်းတွေ့တဲ့သူအသစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အရှက်ကွဲခြင်းအဘို့အဘယ်သူမျှမအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်ဒြပ်ခေါ်ဆောင်သွားဆွထင်ဖြစ်စေမယ့်ကောင်းသောစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်, ကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့အခြားစုံတွဲအစီရင်ခံစာသတိထားဖြစ်ချေ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ကမမျှော်လင့်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဒုက္ခအားဖြင့် blindsided, သင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး, သင့် sexy, သို့မဟုတ်စာရွက်များအကြားသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိကြောင်းတစ်ခုခုကိုယ့်ကိုကိုယ်အပြစ်တင်တက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါသည်။
ဒြပ်ဆွသောတံပိုးမှုတ် lovemaking နိုင်
သင်ယုံကြည်သည်မှာ“ လူတွေဟာလိင်စိတ်နည်းတဲ့အခြားလိင်အင်္ဂါနဲ့လိင်ဆက်ဆံနိုင်ရင် cybersex / Internet porn ကိုမသုံးကြဘူးလား” ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တစ်ချိန်ကစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒါမရှိတော့ဘူး ပြောင်သောအမှန်တရားသည်ပြီးသားအရာများဖြစ်သည် ဟာသလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျအဆင်သင့်နှင့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ပျော်မွေ့ရန်ဆန္ဒရှိရင်တောင်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတုဆွကိုရွေးချယ်သောအခါစိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်သည်။
သူငယ်ချင်းတ ဦး ကမကြာသေးခင်ကပြောခဲ့တာက“ အနည်းဆုံးတော့သူမကိုတုန်ခါမှုကိုမထုတ်ယူခင်ကျွန်မကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးစေချင်ပါတယ်” လို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒီမှာရှုထောင့်ကအမျိုးသမီးပါ။
ကျွန်ုပ်သည်ကြည့်ကောင်း။ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရန်၊ ကျွန်ုပ်၏အသက်အရွယ်ထက်ငယ်ရွယ်သောအသားအရေကိုကြည့်ရှုရန်စဉ်းစားသည်။ တစ်ခါတလေကျွန်မကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတွက်ကျွန်မယောက်ျားက porn ကိုကြည့်တဲ့အခါစိတ်မပျက်ခဲ့ဘူး။ ယခုမူကားသူသည်ငါ့နောက်ကျောနောက်သို့လိုက်ကြည့်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်မရပါဘူး အဲဒီအရာအားလုံးကိုသူနဲ့အတူဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်။ ကျွန်တော်အထီးကျန်ပြီးချိုနေပါတယ် ငါဟာလူတစ်ယောက်နဲ့လိင်မဆက်ဆံတော့တာကိုငါငြီးငွေ့သွားပြီးထွက်ခွာဖို့အလေးအနက်စဉ်းစားနေတယ်။ သူကစိတ်မ ၀ င်စားတော့ဘဲပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံတာကိုမခံရတော့ဘူး။ ငါလိင်မဲ့ဘဝမနေနိုင်ပါ
အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူကိုမျှတစ်ဦးကိုမှန်ကန်အိမ်ထောင်ဖက်မှဒြပ်လိင်ပိုနှစ်သက်ပါ့မလား ယင်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်း, ဒါမှမဟုတ်လူစွမ်းကောင်းတုန်ခါသောကြောင့်, တစ်ဦးပြင်းထန်သောဖြစ်နိုင်သောအောင် မူးယစ်ဆေးကဲ့သို့မြင့်မားတဲ့ အဘယ်သူမျှမကျွမ်းတဝင်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုက်ညီစေနိုင်ပါဘူး။ တစ်ဦးသူတွေဟာထုတ်လုပ်မြင့်မားတဲ့အဖြစ်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းမဟုတ်ပေမယ့် ဖြည့်ဆည်း as သင်နှင့်အတူလိင်ဒါကြောင့်ပိုပြီးနိုင်ပါတယ် ဆွဲဆောင်မှု အချို့သောအခြေအနေများတွင်။
ဒီထူးထူးဆန်းဆန်းသိပ္ပံဝထ္ထုအခြေအနေဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာနားလည်ရန် ဦး နှောက်၏အစာစားချင်စိတ်ယန္တရား၏အာရုံကြောဓာတုဗေဒအကြောင်းနှင့်အနည်းငယ်မျှသိရန်လိုအပ်သည် ယနေ့ hyperstimulating လိင်အကူအညီများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည်။ အတိုချုပ်တစ်ဦးချင်းစီအသစ်ကဗီဒီယို, စုံလင်ပုံရိပ်, လိင်ကစားစရာ buzz များအတွက်အမဲလိုက်ခြင်း, ဘာတှေ့ဆုံ, နှင့် သင်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအားလုံးသည် dopamine ဟုခေါ်သော neurotransmitter ကိုလွှတ်ပေးခဲ့သည်။ အဲဒါ“ ရပြီ!” အားလုံးစွဲနောက်ကွယ်မှအာရုံကြော။ လူတစ်ယောက်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကသူ့ ဦး နှောက်အပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာရှင်းပြခဲ့တယ်
dopamine အလုအယက်သည်အင်တာနက် porn နှင့်အရူးဖြစ်သည်။ ဒါဟာ ဦး နှောက်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးသင်ဟာဘာကိုမှမလုပ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့ပါပဲ။ အရမ်းမူးနေတယ်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့် dopamine အလွန်အကျွံသည် ဦး နှောက်၏ dopamine တုန့်ပြန်မှုကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး အနေဖြင့် cranky, စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အခြား dopamine ပြန့်ပွားမှုအတွက်အလျင်အမြန်ပျင်းရိဆုံးနည်းလမ်းများဖြင့်ထွက်ခွာသွားစေနိုင်သည်။ ထိုစိတ်အခြေအနေ၌၊ အချစ်ဆုံးနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တွေ့ဆုံမှုသည်ပင်အလုပ်နှင့်တူသည်။ သို့သော်အင်တာနက် porn သို့မဟုတ် vibrator သည် dopamine ပြင်ဆင်မှုကိုနှလုံးခုန်နှုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ကစားစရာနှစ်ခုစလုံးသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိပုံမှန်လိင်မှုကိစ္စပြေလည်မှုယန္တရားကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်စွမ်းအားရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ dopamine အမြောက်အများကိုထုတ်လွှတ်ပြီး ဦး နှောက်အချို့ကိုပျော်ရွှင်စေသည်။dopamine မှ sensitivity ကိုလျော့ကျလာ).
ပြtheနာကိုသင်မြင်သလား။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ dopamine ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဒြပ်လှုံ့ဆော်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်နှင့်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
နှင့်အမှန်တကယ်အဖြစ် Davy Rothbart ကရှင်းပြသည်, porn-ကြယ်ပွင့်လိင်တစ် ဦး အလှည့် - ချွတ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်လက်တွဲထားသောလိင်ပိုမိုအာဟာရဖြစ်စေသောလက်ဆောင်များဖြစ်သောချစ်ခင်ထိတွေ့မှု၊ ကာမဂုဏ်အနံ့နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကိုရရှိစေနိုင်သည်။ အဓိကအချက် - ယနေ့ကောင်းသောချစ်သူများသည်သူတို့၏ဘိုးဘေးများနှင့်မရင်းနှီးသောနံရံတစ်ခုကိုထိမှန်နိုင်သည်။ သင်၏ကြင်ဖော်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်းသင်မူကားအတန်ငယ်အကူအညီမဲ့နေစဉ်၌ပင် dopamine dysregulation မှဖြစ်ပေါ်လာသောတုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုကိုဖြေလျှော့ရန်ပြင်းထန်သောဒြပ်အားလှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးများနေ့ကြောင့်တုန်ခါခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် porn အသုံးပြုမှုကိုပုံမှန်လှုံ့ဆော်မှုသူတို့ကိုလျော့နည်းလိင်တုံ့ပြန်မှုစေသည်အစီရင်ခံရန်စတင်နေကြသည်။
ကျွန်တော့်တုန်ခါသူအလုပ်ကိုဘယ်လောက်အထိအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမယုံနိုင်ဘူး။ အရမ်းကောင်းပါတယ် တစ်လအတွင်းမှာကျွန်မရဲ့ရည်းစားနဲ့အော်ဂဇင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး၊ ပြီးတော့လအနည်းငယ်အကြာမှာကိုယ့်လက်ကိုယ်တောင်တောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ တစ်ချိန်က [porn] ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုငါတစ်မိနစ်ထက်နည်းလာခဲ့သည် (မှာအားလုံးအစစ်အမှန်ဘဝကဲ့သို့မဟုတ်!) အလွန်ပြင်းထန်သောဖြစ်ခဲ့သည် လက်တွေ့ဘ ၀ ၌လိင်သည်မည်သည့်အခါမျှထိုအတိုင်းအတာအထိတိုင်းတာနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုပုံမှန်စတင်အသုံးပြုပါက၎င်းမပါဘဲဖွင့ ်၍ မရနိုင်သောသူများထဲမှတစ် ဦး အဖြစ်ရောက်ရှိသွားလိမ့်မည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပိုမိုယောက်ျားအင်တာနက်သတင်းပို့ကြသည် porn နှင့်တိုက်ရိုက်ချက်တင် တဖြည်းဖြည်းမှိုင်းနိုင် သူတို့၏ sensitivity ကို။ တကယ်တော့တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကအီတလီစစ်တမ်းမိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုမှုကြီးထွားလာ copulatory ခွန်အားမရှိခြင်း (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ anorexia) နောက်ကွယ်မှကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည် လုလင်တို့သည်အတွက်။ ဦး နှောက်၏အပျော်အပါးကိုခံစားမှု၏ရလဒ်တစ်ခုမှာလိင်စွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများဖြစ်သည် (တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကိုယ်ခန္ဓာရှိအဆောက်အအုံများကိုပုံမှန်ပုံမှန်မပေးနိုင်ခြင်းထက်ပိုမိုဖိအားများသောအားဖြင့်အသစ်အဆန်းသို့မဟုတ်အားတက်ကြွသောနှိုးဆွမှုလိုအပ်သည်ဟုဖုံးကွယ်ထားသည်) ။
ညစ်ညမ်းသောကော်ပိုရေးရှင်းအတွင်းရှိ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်အလွန်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများအကြားတွင်များပြားလာသောကြောင့်ဖိုရမ်များမှအမျိုးသားများကတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အကြံဥာဏ်များစပေးကြသည်။ (ဒါမဟုတ်ဘူး၊ အများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုစွန့်လွှတ်တဲ့သူတွေ) သူတို့ရဲ့အာနိသင် recover.)
ငါနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနဲ့ထိတွေ့မိသည်အထိကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျန်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်။ ငါဟာကမ္ဘာနှစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးရနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ငါနဲ့အတူလိုက်နေတယ် အခုငါ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပြproblemsနာများနှင့်ကြုံတွေ့နေရပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှင့်ဒစ်ကိုအလွန်ရှုပ်ထွေးစေသည်၊ ၎င်းသည်တစ်ဝက်တစ်ပျက်တည်းသာလျှင်ရှက်စရာအတွေ့အကြုံများဆီသို့ ဦး တည်စေသည်။
ငါသည်ငါ့လယ်ပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်အတွင်းဖြစ်ကြောင်းကိုနဲ့ကျွန်မခြောက်နှစ်အကြာနီးပါးနေ့စဉ် porn မှာရှာဖွေနေစတင်ကတည်းကပြဿနာတစ်ခုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်နဲ့စိုက်ထူရတဲ့နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းရှိခဲ့တယ်။ ငါအနှစ်တဆင့်အမျိုးမျိုးသောထှထှေကေုဆင်းသွားကြပြီအမြဲငါမရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာကိုပြောသည်ပါပြီ။
ဤတွင်လူတစ် ဦး ၏ပုံပြင်ဖြစ်သည်။
ငါ (လိင်) အမိန့်ကိုအမြဲတမ်းလိင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်၊ ငါအခုစိုက်ထူမှုပြproblemsနာတွေရှိနေပါတယ်။ ငါနဲ့အတူအိပ်ချင်ကြတဲ့မိန်းကလေးတော်တော်များများရှိတယ်၊ ပြီးခဲ့သည့်လကငါလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူမအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုတင်ကြံစည်နိုင်သော်လည်းသူမစိတ်ပျက်ခဲ့ပြီးကွန်ဒုံးမပါပဲသူမကိုထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်ကသူမ၌, ငါ့စိုက်ထူခိုင်မာအောင်စတင်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူမစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးသူမကိုထွက်သွားစေခဲ့သည်။ သူက“ ကွန်ဒုံးမရှိဘူး” ဟုပြောခဲ့သည်။ ဒါဟာအလုံအလောက်အပူတပြင်းအခါမည်သူမဆိုအန္တရာယ်ရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒီဟာမကောင်းဘူး
အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါငါငိုခဲ့တယ်။ ထိုလိင်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောရင်းနှီးမှုရလိမ့်မည်။ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးမရခဲ့သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအတူတူယူဆောင်လိမ့်မယ်။ ငါရေးသည်နှင့်အမျှငါလမ်းကြောင်းသစ်ကိုသတိပွုမိပါတယ်။ ရည်းစားနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းစသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများမဟုတ်ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရည်းစားနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း - အားနည်းသောစိုက်ထူမှုများနှင့်မလုံခြုံသောလိင်။
A 2002 လေ့လာချက် ငယ်ရွယ်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုသူ 32% လုံခြုံအသုံးပြုမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့စိုက်ထူပြဿနာများရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အားဖြင့် 2006အရေအတွက်က 37% အထိဖြစ်ခဲ့သည်။ porn စားသုံးမှုတစ်ခုတိုးအချက်တစ်ခုလား ၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည် barebacking တိုး ဂေးအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်?
အဘယ်အရာကိုအမှန်တကယ်ကြောင်းကြားဆက်ဆံရေး disarmony ဖြစ်ပေါ်စေသလဲ
dopamine တုန့်ပြန်ကျဆင်းသွားသည့်အခါဒြပ်ဆွများအတွက်ဝှက်ထားသောလိုအပ်ချက်နှစ်ဦးစလုံး နှင့် ဆွလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန် erodes ဘယ်လို hypersexual ၏အသိအမှတ်ပြုမှုမရှိခြင်း, မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးမျိုးတင်းမာမှုဖန်တီးသောအရာကိုအကြောင်းကိုချို့ယွင်းချက်ယူဆချက်အောင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ငါနောက်တဖန်ငါ့ဟောင်းမှစကားပြောစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်မရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုအကြောင်းကောင်းကောင်းစကားပြောဆိုခဲ့တယ်။ သူမကကျွန်မမှာဒီပြproblemနာကိုမသိခဲ့ဘူး။ ငါသည်လည်းမပြုခဲ့။ သူမလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကကျွန်ုပ်မည်သို့ဝေးဝေးနေခဲ့ပုံကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမကိုလိင်ဆိုင်ရာစိတ်မ ၀ င်စားခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲအလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ခံရခြင်းကြောင့်သူမခြေထောက်နှင့်နွေးထွေးရန်၊ မြင်းကိုစုပ်ယူရန်နှင့် ငါ့ကိုသူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်းနှိုးဆွခံရဖို့အတွက် [Transsexual] rimming ။ ဒါဟာငါ့ကိုတစ်ခုလုံးကိုဆက်ဆံရေးပြန်စဉ်းစားစေသည်။ ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်၏အလေ့အကျင့်များသည်အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သော်လည်းသူမ၏အကြောက်လွန်ရောဂါကြောင့်ကျွန်ုပ်ပြallနာများမှာသူမ (ပြသနာရှိခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဝေးကွာသောကြောင့်) ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကကျွန်ုပ်သည် PMO အပြုအမူ၏နိဂုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်သောဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ အဲဒီအစား, ကသာခြောက်လကြာခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးစုံတွဲသည်လအကြီးအကြ၏ ငါကြည့်တာ၊ ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့အတူတူမရှိတဲ့အချိန်၊ ဒါမှမဟုတ်လိင်မဆက်ဆံတဲ့ညတွေမှာ PMO ကိုပြန်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒါကကျွန်မတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။ သို့သော်ထိုသို့ပြုခဲ့သည်။ သူမကကျွန်မရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပေမဲ့သူမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုစိတ် ၀ င်စားလာတယ်။ ဒါ လမ်း ငါ့ကို shit ထွက်ကြောက်လန်!
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်လိုအပ်သောလများကိုမှတ်ချက်ပေးသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုသမှုလုပ်ငန်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါ“ ငါတို့” လို့ပြောတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြန်လည်စွဲလမ်းနေတဲ့ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူတစ်ယောက်နဲ့အတူရှိနေခြင်းဟာအတူတူကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်လို့ပဲ။ မည်သည့်အမျိုးသမီးကမဆိုသံသယရှိနိုင်သကဲ့သို့သူနှင့်သူမလုံခြုံရေးအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသည့်အခါမျက်မမြင်အစက်အပြောက်အချို့ကိုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီစိုးရိမ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခြင်းဟာသူတို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီဟာကိုဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူး။
မင်းကိုကြောက်နေတဲ့မင်းရဲ့ယောက်ျားတွေအတွက်ဒေါသအမျက်ကြီးပြီးကိုယ့်ရဲ့လိင်တံကိုကောင်းကောင်းသတ်ဖြတ်ခဲ့တယ် - မကြောက်ပါနဲ့။ ဒါဟာတကယ်ကိုပြန်လာပါဘူး ဘုရားကောင်းပါပြီ၊ သူကကျွန်တော်ဟာ“ သူ့လိင်တံကိုပိုကြီးလာအောင်လုပ်ခဲ့တာ” လို့ကျိန်ဆိုခဲ့တယ်။ သူပြောတာကိုကြားရတာဟာကျုပ်ရဲ့လုပ်ရပ်ပဲလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူဟာကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ပြန်လည်နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုကိုပြန်လည်ရရှိစေပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာပျက်စီးခြင်းကိုပြောင်းပြန်
အလွန်အမင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသည်သာမန်လူ့မိတ်လိုက်ခြင်းအပြုအမူကိုကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိအမှတ်မပြုသေးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ပြန်ပေးဆွဲသည်၊ လူ့ဦးနှောက်၏ sensitivity ကို hyperstimulation ရန်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဖျော်ဖြေရေးဖျော်ဖြေမှုကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးပျက်ပြားသွားရင် (ခင်ဗျားကတော့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး) အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားကြည့်အတွေ့အကြုံရင့်အောင်လုပ်ပါ။
ယုံကြည်ချက်, သဘောထားနှင့်အပြုအမူထိခိုက် porn အသုံးပြုမှု? တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုများအထဲက Check - 25 ကျော်လေ့လာမှုများအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးအမြင်များဆီသို့ "ကို un-သာတူညီမျှသဘောထား" ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလင့်ထားသည် - ဤ 2016 Meta-analysis သည်ကနေဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းချုပ်: မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015.